I-5G, ubuchwepheshe bezokuxhumana beselula besizukulwane sesihlanu isizukulwane esisha sobuchwepheshe bezokuxhumana nge-broadband obunezici zesivinini esikhulu, ukubambezeleka okuphansi nokuxhuma okukhulu. Ingqalasizinda yenethiwekhi ukubona ukuxhumana komuntu nomshini wento.
I-Intanethi yezinto iyona mzuzi omkhulu we-5G. Amandla amakhulu okushayela we-5G akuyona nje kuphela isidingo esikhulayo sabathengi samanethiwekhi asheshayo, kepha futhi nokwanda kwamadivayisi wokuxhumana endaweni yezimboni. Lezi zimboni ziya ngokuya zincika kumadivayisi okuxhumana ukuze aqoqe futhi ahlaziye idatha, enze izinqubo zebhizinisi zisebenze kangcono, zenze ngcono umkhiqizo, futhi zithuthukise ngokuqhubekayo imikhiqizo nezinsizakalo. I-5G kulindeleke ukuthi isize amabhizinisi ukuphatha ngokuphumelelayo inani elikhulayo lemininingwane elenziwa yi-Intanethi yezinto, futhi enze ngcono imiyalezo eseduze edingekayo yezinsizakalo ezibucayi zemishini njengokuhlinzwa okusizwa ngamarobhothi noma ukushayela ngokuzimela.
I-circulator kanye ne-isolator ingenye yamadivayisi angumgogodla weziteshi eziyisisekelo ze-5G. Lonke uhlelo lokuxhumana ngomakhalekhukhwini ngokuvamile lwakhiwa ingqalasizinda yezokuxhumana ngamaselula, uhlelo lokumbozwa kokuxhumana ngomakhalekhukhwini kanye nemikhiqizo ebulalayo yeselula yokuxhumana. Isiteshi esiyisisekelo singesokusebenza okuyisisekelo kokuxhumana kwamaselula. Isistimu yesiteshi saseBase imvamisa yakhiwa i-RF front-end, i-base station transceiver kanye ne-base station controller. Ingaphambili le-RF libhekele ukuhlunga isignali nokuzihlukanisa, i-base station transceiver inesibopho sokwamukela isignali, ukuthumela, ukukhulisa nokunciphisa, futhi isilawuli sesiteshi sesisekelo sinesibopho sokuhlaziywa kwesiginali, ukucubungula nokulawulwa kwesiteshi sesisekelo. Kunethiwekhi yokungena engenantambo, i-circulator isetshenziselwa ukuhlukanisa isignali yokukhipha kanye nesignali yokufaka ye-base station antenna. Ngokusebenzisa izinhlelo ezithile, i-circulator ingafinyelela le misebenzi elandelayo namanye amadivayisi:
1. Ingasetshenziswa njenge-antenna commoner;
2. Ngokuhlanganiswa ne-BPF nge-attenuation esheshayo, isetshenziswa ekujikelezeni kwesigagasi;
3. Isiphikisi sokugcina sixhunywe ngaphandle kwe-circulator njengesihlukanisi, okungukuthi, isignali ukufaka nokukhipha kwitheku eliqokiwe;
4. Xhuma i-ATT yangaphandle bese uyisebenzisa njengesigudluli esinomsebenzi wokuthola amandla obonakalayo.
Njengenye yezinto ezibaluleke kakhulu, izingcezu ezimbili ze- Samarium Cobalt disc odonsanikeza amandla kazibuthe adingekayo ukuchema umkhondo olayishwe nge-ferrite. Ngenxa yezimpawu zokumelana nokugqwala okuhle nokuqina kokusebenza okuphezulu kuye kuma-350 ℃ degrees, womabili odonsa beSmCo5 neSm2Co17 asetshenziswa kuma-circulators noma kuma-isolators.
Ngokusetshenziswa kobuchwepheshe obukhulu be-MIMO be-5G, ukusetshenziswa kwama-circulators kanye nabahlukanisi kuye kwanda kakhulu, futhi isikhala semakethe sizofinyelela kaningana nge-4G. Esikhathini se-5G, isidingo samandla enethiwekhi siphezulu kakhulu kunaleso se-4G. IMassive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ingenye yezobuchwepheshe obuphambili bokuthuthukisa amandla wenethiwekhi. Ukuze uxhase lobu buchwepheshe, inani leziteshi ze-antenna ze-5G lizokhula kakhulu, futhi inani leziteshi zomkhakha owodwa we-antenna lizokhuphuka lisuke eziteshini ezi-4 neziteshi eziyi-8 esikhathini se-4G ziye eziteshini ezingama-64. Ukuphindwa kabili kwenani leziteshi kuzophinde kuholele ekwenyukeni okukhulu kwesidingo sama-circulators ahambisanayo nabahlukanisi. Ngasikhathi sinye, ngezidingo ze-lightweight ne-miniaturization, izidingo ezintsha zevolumu nesisindo zibekwa phambili. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthuthuka kwebhendi yemvamisa yokusebenza, ukungena kwesiginali akulungile futhi ukuncishiswa kukhulu, futhi ubukhulu beziteshi ze-5G buzoba buphakeme kunobo be-4G. Ngakho-ke, esikhathini se-5G, ukusetshenziswa kwama-circulators kanye nama-isolators, bese kuthi omazibuthe be-Samarium Cobalt bazokhuphuka kakhulu.
Njengamanje abakhiqizi abakhulu be-circulator / i-isolator emhlabeni bafaka i-Skyworks e-USA, i-SDP eCanada, i-TDK eJapan, i-HTD eChina, njll.